Mkpọnaka | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Nkwadebe maka ọgụ megide Colorado nduku ebe
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-eto eto dị iche iche kụrụ ga-eche ụdị ụdị pests pests. Ikekwe onye kachasi ama n'etiti ha bụ Colorado nduku ebe, nke nwere ike imebi nduku na-eto eto na ihe gbasara ụbọchị. Nyere na ihe oriri a na-etolite n'ebe a ọtụtụ mgbe, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na nsi maka Colorado nduku ebe a na-achọ mgbe niile na ụlọ ahịa.
Otu esi eji aka aka gi eme akwa
Ịdị adị nke onu na mbara ihu nke 10th floor na a kabinet na ọka bụ ihe atụ, ọ bụ ezie na ọ dị njọ, mana ka ọ ga-ekwe omume. Ihe na-akpata nsị n'ime ụlọ nwere ike ịdị nnọọ iche. Tụlee ha n'ụzọ zuru ezu. Gịnị mere ụmụ nwanyị ji abịa ileta? Ọtụtụ mgbe, anyị onwe anyị na-akpalite òké ịbịa leta, na-echefu banyere ịnọgide na-adị ọcha ma na-edozi n'ógbè ahụ ma na-ahapụ nri na ebe ndị dị mfe.
Otu esi emeso oke n'ulo ulo
Ọdịdị nke oke dị na ụlọ ndị mmadụ na-eduga n'ókèala ebe ndị mmadụ bi n'ebe ahụ. Mmeputara nke òké na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọsọ ọsọ, ha na-eme mkpọtụ, nsị, ihe nkwata nri, na ihe ndị na-adịghị mma na ndị dị ize ndụ na-ebu ihe karịrị ụdị 70 ọrịa. Ọ dịghị mfe ịnagide mwakpo ndị na - awakpo - na narị afọ nke narị afọ gara aga na ụmụ mmadụ, oke dị iche iche ejiriwo ụdị ọnyà dị iche iche nyocha onwe ha n'ụzọ zuru oke, ya mere taa ọ dị mkpa itinye usoro kachasị ọhụrụ na nke dị irè.
Na-akpọrọ apotheosis nke ọdịdị na-emekarị nke ọma na amara: ihe niile banyere ihe ọcha nke na-acha ọcha orchids Phalaenopsis n'ụlọ
Udara "Mkpụrụ pọmigranet nke oyi": njirimara
The Italian ibu pasili dịgasị iche iche bụ a tọrọ ụtọ mgbakwunye gị efere. Foto, nkọwa na ozi ndị ọzọ